Warbixin: Meesha ay marayaan Wadahadaladda ka socda Dhuusamareeb | KEYDMEDIA ONLINE
Warbixin: Meesha ay marayaan Wadahadaladda ka socda Dhuusamareeb
Magaalada Dhuusamareeb waxaa weli ka socda shirka u dhexeeya Madaxda Dowladda Federalka Soomaaliya, Maamulada Xubnaha ka ah iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
DUUSAMAREEB, Soomaaliya - Shirkaan oo galay habeenkii labaad ayaa tan iyo markii uu billowday si adag looga hadlayay arimaha la isku hayo ee la xariira doorashooyinka, qeybihii ugu adkaa ee shirka ayaa maanta la guda galay waxaana si guud loo gorfeeyay Afarta Qodob ee shirka aas aaska u ah.
Sida Keydmedia Online hore u qortay, is araggii koobaad ee shirka waxaa laga wada hadlay ajandaha arrinta kuraasta Soomaaliland, taas oo laga muujiyay isku soo dhawaansho, Cabdi Xaashi Cabdullahi ayaa qadka taleefanka lagula hadlay, qodobka soo xulidda Xildhibaanada Somaliland ayaa la isla gartay in guddiga xubnihiisa isla soo magacaabaan Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed.
Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Ra’iisul wasaare ku xigeynka ayaa sidoo kale loo xil saaray in ay arrintaan wixii ka dhiman dhameystiraan, hayeeshee masuuliyiintaan oo maanta ku kulmay Muqdisho ayaa isku fahmi waayeen maamulka doorashada, Guddoomiye Cabdi Xaashi ayaa ka soo hor jeestay soo jeedin uu la yimid Mahdi Guuleed, Taas oo ah in Saddex xubnood uu soo qorto Guddiga doorashada Aqalka Hoose iyo hal Xubnood ee Guddiga doorashada heer Federaal ee Aqalka Sare.
Sida ilo xog ogaal ah sheegayaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi, ayaa dalbaday in la sameeyo Guddi kor-joogto ka noqdo maamulka Doorashada Baarlamaanka Somaliland, kuwaas oo marjac u noqdaya arrimaha masiiriga ah iyo soo xulidda Xubnaha Aqalka Sare. Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam, ayaa loo xil saaray inuu gar wadeen ka noqdo arrintaan.
Waxaa sidoo kale la lafa guray arrinta Gobolka Gedo, waxaana laga muujiyay isku soo dhawaansho, Guddiga Doorashada Jubbaland in la geeyo Garbahaarey ayaa la isku af-gartay, sidoo kale waxaa la qorsheeyay in Ciidan Boolis ah oo ka tirsan AMISOM la geeyo Garbahaarey kuwaas oo aan ahayn ciidanada ka socda wadamada xuduudda la leh Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale hoosta laga xariiqay in guud ahaan Maamulka Jubbaland lagu soo celiyo magaalada Garbahaaray, inkastoo Madaxweynaha Axmed Madoobe uu dalbanayo in Doorashada ka hor la qabto dib u heshiisiin, hadana arrinta Gedo xalkeeda waxaa loo saaray Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Puntland, Galmudug, Koofur Galbeed iyo Hirshabelle.
Arinta kale ee Shirka looga hadlay ayaa ah Guddiga doorashada dadban ee lagu muransan yahay, waxaana la isku raacay in xubanaha hareer marsan heshiiskii 27 September 2020 lagu gaaray Muqdisho ee Guddiga ku jira in laga saaro si la isugu soo dhawaado.
Jadwalka Doorashooyinka ayaa laga hadlay, sida KON ogaatay, waxaana la isku raacay in sanadkaan gudihiisa la qabto doorashada Madaxweynaha, Labada Gole Doorashaddona aysan dhaafin bisha Maarso ee soo socota, bisha July ee sanadkaan ayaa qeyb ka mid ah madaxda shirka fadhisa sheegeen in ay noqoto kama danbeysta xilliga Doorashooyinka, halka kuwa kale soo jeediyeen in doorashadu aysan dhaafin bisha April ee soo socta.
13 kursi ee Gobolka Banaadir ayaa sidoo kale laga dooday, inkastoo madaxda oo dhan ay isla ogoshahay in ku dhawaad Afarta Malyan ee qof ee Muqdisho ku nool ay maqaam iyo matalaad hesho, hadana ma jirto heshiis laga gaaray arintaan oo ilaa hadda bannaanka uso baxday.
Shirkaan, oo kulankiisii furitaaanka u muuqday inuu fududaan doono, isla markaana uusan qaadan doonin xilligii la filayay ayaa galay habeenkiisi labaad, waxaana laga muujinayaa rajo wanaagsan iyo in ay kasoo baxaan qodobbo wax ku ool ah.
Beesha caalamka ayaa qoraallo ay cadaasis ku saarayso madaxda ku shiraysa Dhuusamareeb, si si daba jog ah u soo gudbinaya, waxaana Farmaajo oo waqtiguusu dhamaaday laga sugayaa kulanka uu Baarlamaanka hor imaanayo inuu la yimaado heshiis kama danbeys ah, oo dalku ku aadayo doorasho loo dhan yahay.